‘अप्रिल फूल’ अर्थात ‘मुर्ख दिवस’ किन मनाइन्छ ? कहाँबाट सुरु भयो ! « Salleri Khabar
‘अप्रिल फूल’ अर्थात ‘मुर्ख दिवस’ किन मनाइन्छ ? कहाँबाट सुरु भयो !
काठमाडौं । अप्रिल फुल प्रत्येक वर्ष अप्रिल महिनाको १ तारिखको दिन विश्वका विभिन्न देशमा मनाइन्छ। नेपालीमा ‘फुल’लाई “मूर्ख” भनिन्छ । मान्छेहरूलाई झुटो बोलेर, ख्याल ठट्टा गरेर मुर्ख बनाउने भएकोले यो दिनको नाम अप्रेल फुल रहन गएको हो । यो दिनमा सबैले एक अर्कालाई मुर्ख बनाएर रमाइलो गर्छन् ।
पहिला पहिला अप्रिल १ लाई नै नयाँ वर्षको पहिलो दिन मानिन्थ्यो ! मानिसहरु जनवरी १ लाई होइन अप्रिल १ लाइ नै ‘न्यु एअर इभ’ मान्दथे । पछि केही बुज्रूकले आन्दोलन गरे र जनवरी लाई पहिलो महिना माने र ति पहिलाको जस्तै अप्रिल महिनालाई नै पहिलो महिना मान्नेहरूको नै ब्यङ्ग्य गर्न लागे र अप्रिल फुलको सुरूवात भयो ।